Kabsado Music ka iPod - ceshano tirtiray & formatted heeso ka iPod
> Resource > iPod > Sidee inuu ka soo kabsado Music ka iPod
Fursad: Ma soo kabashada music iPod suurto gal ah?
Waxaa jira sababo kala duwan oo keena aad music iPod in lagu lumin, sida la tirtiro, formatting, shil nidaam, iyo arrimaha kale ee aadanaha ama aan aadanaha. Macna ma laha inta music iPod lumo, natiijadu waa isku mid: aadan ku raaxaysan karaan music mar dambe.
Marka music lumay, oo kaliya in ay meel degan sida calaamad oo sida lacag la'aan ah data cusub: Wakhtigan, waxaa jira hal wax aad u baahan tahay in aad ogaato ka. Taas macnaheedu waxaa weli fursad si aad u hesho dib music lumay ka hor booska ka qaaday xog cusub.
Xalka: Sidee ayaan u soo kaban karto, music ka iPod?
Si aad u soo kabsado music tirtiray ka iPod, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo barnaamijka xirfadle iPod kabashada music. Haddii aad wali raadinayaan mid, aan soo jeediyo waa Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS. Labada shaqada software kabashada sawirkan si fiican ku soo kabashada music iPod, wax aad isticmaalayso iPod Nano, shaandheyn ama Classic. Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada oo muusiko ah qaabab kala duwan, sida MP3, regelingen, WMA, OGG, AAC, AIF (AIFF), M4A, bartamaha, iwm
Isku day version maxkamad free of this software kabashada music iPod hadda hoos ku qoran.
Step1. Connect aad iPod in kombiyuutarka
First of dhan, xiriiriyaan iPod in computer ka iyo in la hubiyo in ay ka aqoonsan your computer. Markaas abuurtaan software ah iPod kabashada music iyo shaqo bilaabi soo kabashada.
Step2. Baarista music badiyay aad iPod
Dooranaysaa aad iPod oo uu bilaabo inuu iskaan. Scan ka hor, waxaad nadiifin kartaa iskaanka adigoo isticmaalaya filter haddii aad u baahan tahay.
Step3. Kabsado music iPod
Tallaabo hore: Hubi files music iyo iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Waxa fiican in la badbaadiyo music lumay on your computer hore halkii lagu badbaadinayo on iPod si toos ah, waayo, ammaan xogta aawadiis. Ka dib oo rumayn Kitaabihii dhammaan faylasha dib, waxaad u dajiyaan karaa th
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray / Khasaaray Faylal ay ka iPod
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPod taaban Faylal ay ku Mac
Delete Songs ka shaandheeyn lagu iPhone / iPad / iPod
2 Free iPod in PC Transfer Tools
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Android inay iPod